Jwxo-shiil, oo Tuugay Jaaliyada Somaliweyn in ay Magaceeda Ugu Qabato Shir Dhaqaale ku Doon – Rasaasa News
Jul 12, 2010 Jwxo-shiil, oo Tuugay Jaaliyada Somaliweyn in ay Magaceeda Ugu Qabato Shir
War xog ogaal ah oo aanu ka helay dalka Ingriiska ayaa tibaaxaya, in Jwxo-shiil, uu ku jiro arimo naxdin iyo yaableh. Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu waydiistay baa la yidhi rag reer xamar in ay shir u qabtaan, wuxuuna u sheegay in uu dadka reer xamarka ah jecelaa xiligii uu xamar joogay, wuxuuna sheegay in uu mar guursaday naag reer xamar ah.
Waxaa dhibaato iyo ceeb ah in dhaqaale doonimo darteed kolba qolo laysugu dhajiyo, Somaliweyn ONLF-ta uu haatan ku jeeblaysto Jwxo-shiil si cad by banaan uga martay, iyada oo kuna eedaysay in dhibaata gumaysi ee haysata Ogadeeniya ay ugu wacan tahay Somaliweyn. Kolkii ay ummada Somalida Ogadeeniya ka joojiyeen qaaraankii, ayaa waxaa uu eegga u jeedsaday jeebka Somalida oo uu meel walba kaga dawarsadaa halgan baan ku jiraa.
kooxda Jwxo-shiil, ayay dawlada Ingriisku mar hore ka xarintay in Jaaliyadiisa ku qadhaabata qolka Kaniisada in ay u qabato wax kulan ah. Waxaa arimahan keenay khilaafka xooga leh iyo qabyaalada dhextaal dadwenaha Somalida Ogadeeniya ee ku nool dalka Ingriiska, ka dib kolkii ay ogaadeen in ujeedada Jwxo-shiil ay tahay uun lacag uruursi [dollar].
Waxaa uu Jwxo-shiil, kaga eedaysan yahay dalka Ingriiska in uu dilay dad British, uuna sugayo u yeedhida Maxkamada [criminal court].
Waxaa kale oo ka dhacay dalka Ingriiska dacwado dhexmaray xubno ka mid ah dadweynaha Somalida Ogadeeniya, ka dib kolkii uu gacan ka hadal ka dhacay kulamo Jaaliyada dhaxdeeda ah.
Jwxo-shiil, oo ay xiligan meel walba ka soo xidhantay, ayaa baryootamay Jaaliyad reer xamar ah in ay shir u qabato si bal maruun dalka uu degan yahay meel fagaare ah uu uga hadlo.
Sida ay wararku sheegeen waxaa uu kolkii hore waydiistay Jaaliyada dhulbahantaha ee xaafada Southal in ay shir u qabato, kolkii ay Jaaliyadu dib isu waraysatay ayey ka cudur daartay in ayna xiligan wakhti haynin.
Jwxo-shiil, ayaa baryahan waxaa uu garab ka dhiganaya beelo ka mid ah beelaha dega Ismaamulka Somalida oo sad bursi helay intii ay ONLF dagaalka ku jirtay ee la takooray beesha Ogadeenka. Beelahan ayaa waxay xiligan ku doodayaan in aan halganka ay ONLF wado la joojin oo la taageero, xagee ayey joogiin kolkii dagaalka lagu gumaaday beesha Ogadeen. Arintani waxay u egtahay in beelahani ay isleeyihiin sad bursigii ha idiin sii socdo oo dagaal galiya beesha Ogadeen.
Hadaba, waxaa isweydiin leh, hadii uu Jwxo-shiil shir u qaban waayey Ogaden iyo ummadii halganka waday ma reer xamar iyo dad ka socda Jamhuuriyada Somaliyeed ayuu shir u qaban oo uu ku odhan xornimo doon baanu nahay, ileen waynu ognahay maanta oo Somali Xabashi ayey u kala tartamaysaaye.
Digniin: Jaaliyada reer xamarka waxaa loo sheegayaa in ay ka dheeraadaan Jwxo-shiil iyo dhibkiisa una dhaga nuglaadaan Jaaliyada Somalida Ogadeeniya oo aan iyadu jeclayn in uu Jwxo-shiil soo dhex joogsado meel ay joogaan dadkeedu.